Izihlangu zeFreezer → Iivenkile ezibandayo zempahla |
Izihlangu zeFreezer kwiimeko ezibi kakhulu
Kwisebe iimpahla zefriji kunye nevenkile ezibandayo kukho isigaba sefriji yezihlangu. NGAPHAKATHI udidi lwezihlangu sikwabonelela ngekawusi ezifudumeleyo ezifudumeleyo ezenzelwe ukusebenza kumaqondo obushushu asezantsi. Izicathulo ezinamandla, ii-seams eziqinisiweyo kunye nokuncamathelisa okongezelelweyo sisiqinisekiso sokhuseleko kunye nentuthuzelo. Izicathulo azinalo kuphela izinto eziguqulwe ukuze zisebenze kwizikhenkcezisi kunye namagumbi abandayo, kodwa zijongeka njengangoku.
IBERING BIS iibhutsi zevenkile ebandayo
Umgangatho ophezulu wentuthuzelo nokhuseleko
Iinyawo lelinye lawona malungu omzimba athambekele ekupholiseni, yiyo loo nto kubalulekile ukuba uzikhusele ngokufanelekileyo kubo bonke abo basebenza iiyure ezininzi yonke imihla kumagumbi apho amaqondo obushushu ehla aye kuthi ga kuma -45 degrees celcius.
Ukongeza kuncedo kunye nentuthuzelo, ubungakanani obukhethiweyo ngokufanelekileyo, izihlangu kufuneka zibonelele ngokhuseleko olusebenzayo kwiqabaka. Ngale nto engqondweni, saqinisekisa ukuba iimodeli ezahlukeneyo ziyavela kwisibonelelo.
Isibonelelo siquka izihlangu ezigcina amanzi ezibandayo ezenziwe ngofele lwenkomo olufana Iibhutsi ezifakwe i-BCW, izihlangu ze-BCU zigqunyiwe. Sikwanazo neebhutsi zevenkile ezigcina amanzi IBHINTSI BIS Yenziwe ngomxube wePU ukumelana namaqondo obushushu asezantsi ukuya kuthi ga kwi-30 degrees. Iimodeli ezibiza kakhulu zizihlangu zeRockfall.
Izihlangu Ingxondorha yaseAlaska Coldstore bakhusela ekuweni phantsi ukuya kuthi ga kwiidigri ezingama -40, zenziwe ngofele oluphezulu lweenkozo, olunokuphefumla kwaye alunamanzi. Ukongeza, bane-Thinsulate® B600 ye-thermal kuphela, ebonelela ngeyona nto iphakamileyo yokugquma kunye nenkululeko yokunxiba.
Iimveliso zeRockfall ziyafumaneka uku-odolwa zingaphelanga iintsuku ezisi-7 zomsebenzi, njengoko zithunyelwa zivela kwindawo yethu yokugcina eNgilane.
I-ROCKFALL iAlaska COLDSTORE ivenkile ebandayo yokukhusela izihlangu ukuya kwi -40 ° C
Ukongeza kwizihlangu eziluncedo emsebenzini, sikwabonelela ngeekawusi ezifakwe igqunyiwe, kuxhomekeke kwimodeli eyenziwe ngoboya, inayiloni okanye ilaphu elitshiweyo elishushu. Ukufumaneka ngokubanzi kobungakanani kukuvumela ukuba ukhethe imveliso yabasetyhini kunye neyamadoda.
Ukunikezelwa kwempahla yokugcina ebandayo kubandakanya iimveliso zeseti epheleleyo yempahla yomqeshwa. Kukho iithebhu kwivenkile ibhulukhwe, jackethi, iiglavu i oovimba iivenkile ezibandayo kunye nezikhenkcisi.
Izicathulo zeColdstoreiibhutsi zevenkile ebandayoiibhutsi zevenkile ebandayoizihlangu zokhuselekoIzihlangu ezifakiweyoIibhotshi zerockfallizihlangu kumaqondo obushushu asezantsiizihlangu ezizodwa